को बन्ला नेपालको पहिलो ‘नेपाल आइडल’ ? फिनाले आज |
को बन्ला नेपालको पहिलो ‘नेपाल आइडल’ ? फिनाले आज
22 September, 2017 | Sandeep Bhattarai | 1865 Views | comments
पहिलो फ्रेन्चाइज शोका रुपमा रहेको नेपाल आइडलले ८ महिना लामो यात्रालाई आज औपचारीक रुपमा अन्त गर्दैछ । यसबाट नेपालले पहिलो नेपाल आइडल प्राप्त गर्ने छ ।
गत वर्ष माघ १२ गते नेपालगन्ज अडिसनबाट सुरु भएको नेपाल आइडल यात्रा आज कतारको सनायामा हुने ग्रान्ड फिनालेसँगै अन्त्य हुँदैछ । जसमा फाइनलमा पुगेका तीनै जना बुद्ध, निशान र प्रताप खाली हात फर्कनेत छैनन् तर आइडल भने दर्शकका भोटका आधारमा एक जनामात्र घोषणा गरीने छ । यसका लागि एक हप्ताअघिदेखि नै भोटिङ खुला भइसकेको छ र आज नेपाली समय अनुसार साँझ ५ बजेसम्म भोटको समय तोकिएको छ ।
कार्यक्रमको अहिलेसम्मको भोटिङ प्याटर्न हेर्दा प्रताप दास सबैभन्दा बढी चार पटक डेन्जर जोनमा परेका छन् यस्तोमा निशान दुई पटक र र बुद्ध लामा एक पटक डेन्जर जोनमा परेका छन् । त्यसोत टप फोर इलिमिनेशन नहुँदा अदालतमा मुद्दा परेको थियो । जसले गर्दा कममत संख्या अनुसार प्रताप दासले नेपालभित्रबाट सबैभन्दा बढी भोट पाएका थिए । उनलाई विदेशबाट भोट भने कम आएको थियो। विदेशबाट सबभन्दा बढी भोट भने बुद्ध लामाले पाएका थिए। विदेश र स्वदेश दुवैमा कम भोट पाउने भने निशान थिए ।
त्यसोत फिनालेका लागि यस पटक एक हप्तासँग भोटिङ खुलाइएको छ भने अन्तर्रा्ष्ट्रिय भोटिङमा पनि एक आइडी बराबर ५० भोट गर्न पाइने (पहिले १० मात्र) भएकोले भोट संख्या बढ्ने पक्का छ । एकै जनाले धेरै आइडी बनाउने र प्रोक्सी राखेर नेपालबाटै अनलाइन भोटिङ गर्नेहरुको संख्या पनि बढेकोले कसले बाजि मार्ला भन्ने अनुमान सहज छैन् ।
यदि पुरानै प्याटर्नले निरन्तरता पाएमा सर्वाधिक बलियो दाबेदारमा बुद्ध लामा अग्रस्थानमा रहने छन् । त्यसोत बुद्धको सक्रियाता पछि अन्य दुई आइडल दाबेदारका फ्यानहरु धेरै सक्रिय भएको खण्डमा नतिजा फरक आउने सम्भावनालाई नर्कान सकिन्न । यसको उदाहरणका रुपमा प्रताप दासलाई लिन सकिन्छ जब जब डेन्जर जोनमा प्रताप पर्थे, अर्को साता उनी सेफ हुन्थे । बुद्धलाई देश र विदेशबाट राम्रो साथ भएकोले उनको भोट संख्यामा पक्कै प्रभाव पर्नेछ। निशान भटराइका पनि फ्यानहरु प्रशस्त छन्। उनीहरु सक्रिय भए भने उनको संख्या पनि बढ्न सक्छ । पछिल्लो भोटिङमा नेपालभित्रबाट सबैभन्दा बढी भोट ल्याएका कारण प्रतापलाई पनि कम आँक्न मिल्दैन यस्तोमा जो आइडल भए पनि विवादरहित हुने सम्भावना भने कमजोर छ ।
फ्रेन्चाइज शो भएको कारण भोट गणना राम्रोसँग हुन्छ भन्नेमा संका हुने गर्दछ एक पटक दक्षिण अफ्रिकाको आइडलको सिजन ‘भी’ फिनाले केपटाउनकी साशा ली डेभिड्स र जेसोन हार्टम्यानबीच भएको थियो। साशालाई विजेता घोषणा गरेपछि हार्टम्यानमा ३ हजार फ्यानले होहल्ला मच्चाए । त्यहाँको पत्रिका द टाइम्सले अनुसन्धान गर्यो र विजेता घोषणा भएको चार दिनपछि ८ मे २००९ मा पहिलो पेजमा यो स्क्यान्डल छापियो ।
त्यो समाचार छापिएकै दिन स्थानीय आयोजक एमनेट (एपीवान जस्तै) ले सार्वजनिक विज्ञप्ति निकाल्दै खासमा विजेता जेसन हर्टम्यान भएको घोषणा गर्न बाध्य भएको थियो । खासमा अलेक्ज्यान्डर फोर्बर्सले भोट गणना गर्दा दुई लाख भोट गन्न बिर्सेका रहेछन् जुन भोट हर्टम्यानको पक्षमा आएको थियो । जसले नतिजानै फरक पर्न गएको थियो ।
त्यसपछि मूल लाइसेन्स होल्डर फ्रिम्यान्टल मिडिया र एमनेटले दुवैलाई विजेता घोषणा गरिदियो। पुरस्कार दुवैले बाँडे। विश्वमा एउटै आइडल शोका दुई विजेताको कीर्तिमान अझैपनि उनीहरुको नाममा रहेको छ ।
पछिल्लो पटक नेपाल आइडल नामको शो २०७० सालमै आयोजना भइसकेको र विक्रम राई पहिलो नेपाल आइडल घोषणा भइसकेको भन्ने विवाद भयो । हिजोको कार्यक्रममा एउटा मोटरसाइकल पुरस्कार दिएर एपिवान टिभीले यसलाई पनि सल्टाउँदै कार्यक्रममलाई विवाद मुक्त गर्ने प्रयास गर्यो यद्धपि शुक्रबार हुने ग्रान्ड फिनाली सँगै नेपाल आइडल स्थापित हुनेमा भने संका रहने छैन् ।
सागर आले नेपाल आइडल को ‘टप ४’ बाट बाहिरिए
#को बन्ला नेपालको पहिलो 'नेपाल आइडल'